Vaovao - fanapahana kapila & familiana kodiarana
Fanapahana kapila & fikolokoloana kodiarana
A: Fitaovana fanapahana kapila:
Ny kapila fanapahana dia azo zaraina ho karazany roa: kapila fanapahana kapila sy kapila fanapahana diamondra. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fanapahana vokatra vy mahazatra, vy tsy vita amin'ny vy & fitaovana tsy vy. Ankoatr'izay, noho ny fiasan'ny tontolo iainana amin'ny fanapahana sy ny famolahana, toy ny angovo nokleary sy ny angovo hafanana ary ny fitakiana fandidiana hafa dia mila manafaka vy sy solifara ary singa simika hafa mba hiasa tsara. Noho izany, misy kapila fanapahana manokana ho an'ny indostrian'ny angovo nokleary, ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana fanapahana isan-karazany amin'ny vy karbonika, vy tsy misy fangarony, vy vita amin'ny vy, vy vy sy metaly hafa:
A: Ampahan'ny kapila fanapahanas
Ny kapila fanapahana dia vita amin'ny abrasives, bonding agents. Ny toetoetran'ny kapila fanapahana dia faritan'ny antony toy ny marokoroko, ny haben'ny sombin-javatra, ny fatorana, ny hamafiny, ny endrika ary ny habeny. Anisan'ireny, ny abrasive dia matetika ampiasaina ho toy ny alumina oxide na diamondra, ary ny ampahany manimba ihany no tena tafiditra amin'ny fanapahana sy fikikisana!
C: Fanapahana sy fametahana kapila fanondroana
Ny famaritana ankapobeny ny kapila fanapahana sy ny kapila fikosoham-bary dia tsy dia samy hafa be. Noho ny fomba fampiharana azy samy hafa dia matevina ny kapila fikosoham-bolo, ka maharitra kokoa izy io eo ambanin'ny fepetra fitadiavam-bolo, fa ny kapila fanapahana kosa dia ampiasaina amin'ny fanapahana lava ary tsy azo ampiasaina ho kapila fikosoham-bary, raha tsy hoe Namboarina ny kodiarana miaraka amin'ny fanapahana sy ny fikosoham-bary, raha tsy izany dia mety hampidi-doza ny fihetsika rehetra izay tsy manaraka ny endrik'ilay vokatra.
D.Endri-javatra amin'ny kapila fanapahana
Ny kapila fanapahana resin dia mora tapaka, mety manimba ny sangan'asa na manimba ny mpiasa aza, ka mahazo fonony miaro rehefa manapaka.
Ny kapila fanapahana firaka TAA dia vokarin'ny brazing. Amin'ny toe-javatra sasany, ny sosona diamondra dia miraikitra mafy amin'ny vongan-tsolika aorian'ny fizotry ny vy. Ity karazana vokatra ity dia manana ny mampiavaka ny fahombiazan'ny fikolokoloana avo, ny androm-piainana lava, ny fiarovana, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny tsy fandotoana.Voalohany manolo ny kapila fanapahana corundum famafana ankehitriny, kapila fanapahana electroplated, ary kapila fanapahana sinetika mafana be. Izy io dia mety amin'ny fanapahana fantsona boribory, vy vy toradroa, bara vy, vy vy, fantsom-by, fantsom-pitaovana, ary profil hafa momba ny vy, ao anatin'izany ny "fanariana vy fanoratana marina", vy vy fitaratra spheroidal ary vy isan-karazany.
fampitahana eo anelanelan'ny kapila resin misy kapila diamondra: